Vaovao - Firy kilometatra hanovana ireo kapila vita pirinty isaky ny mandeha?
Valve novakin'ny tanana
Fialan-tsasatra ho an'ny Mercedes-Benz
Ireo kojakoja ho an'ny Scania
Fiantohana ho an'ny Volvo
Fialantsasatra ho an'ny DAF
Fialantsasatra ho an'ny IVECO
Fialan-tsasatra ho an'ny MAN
Fialan-tsasatra ho an'ny RENAUL
Firy kilometatra hanovana ireo kapila vita pirinty isaky ny mandeha?
Voalaza fa ny rafazy dia tsy raikitra ny fanovana azy isaky ny firy. Miankina amin'ny fepetra mitondra fiara sy ny fahazarana mitondra fiara izany. Ireo fahazarana ireo dia hisy fiantraikany amin'ny fampiasana ny valizy. Raha hainao tsara izany dia ho hitanao fa amin'ny tranga maro dia tsy ilaina ny manitsaka freins mihitsy. Raha ampiasaina tsara ilay sarimihetsika dia mety hahatratra 100.000 kilometatra izany.
Avy eo, amin'ny toe-javatra inona no mila manolo ny pad freins, azonao atao ny mamakivaky ireto fizahana matetika manaraka ireto, ary manolo azy ireo avy hatrany raha mahafeno ny fepetra.
1. Zahao ny hatevin'ny pads frein
Hamarino raha manify ny valizy. Afaka mampiasa jiro kely ianao handinihana sy hijerena. Rehefa hitan'ny fanaraha-maso fa efa ho simba ny fitaovana fikororohana mainty an'ny valizy, ary latsaky ny 5 mm ny hateviny dia tokony hoheverinao ny manolo azy.
2. Feon'ny fanerena
Raha maheno sento metaly mahery ao anaty frein ianao mandritra ny fiara tsy mandeha isan'andro dia tsy maintsy mitandrina ianao amin'izao fotoana izao. Ity no vy fanairana amin'ny pads frein efa nanomboka nitafy ny kapila, ka io feo vy maranitra io.
3. Hery fanidiana
Rehefa mandeha eo amin'ny arabe sy manitsaka ny frein ianao, raha mahatsiaro ho mavesatra dia misy fahatsapana malefaka foana. Ilaina matetika ny manindry ny frezy lalindalina kokoa mba hahatratrarana ny vokatry ny freins teo aloha. Rehefa ampiasaina ny frezy vonjy taitra dia mazava ho ambany ny toerana misy ny pedal. Mety ho very ny fikororohana ireo valizy ary tsy maintsy soloina amin'izao fotoana izao, raha tsy izany dia hitranga ny lozam-pifamoivoizana.
Firy kilometatra hanovana ny kapila novakiny?
Amin'ny ankapobeny dia miova isaky ny 60000-70.000 kilometatra ny kapila vita amin'ny frezy, saingy ny antsipiriany dia miankina hatrany amin'ny fahazarana sy ny tontolo iainana fampiasan'ny tompony. Satria samy manana ny fahazarany mitondra fiara ny tsirairay, tsy mitovy ny kapila sy ny valiny fanidiana. Raha ny marina, ny kapila vita amin'ny frezy sy ny paosy dia asa lehibe iray izay tsy maintsy voamarina alohan'ny hamiliana. Ny sasany amin'ireo fivarotana 4S dia tena tompon'andraikitra tokoa ary afaka mampatsiahy anao fa mila soloina ireo kapila vitazy.
Rehefa soloina imbetsaka ny valin-drakitra dia hitombo ny fiakanjoan'ireo kapila vita amin'ny frezy. Amin'izao fotoana izao dia tsy maintsy soloina ireo kapila vitazy. Ny kapila vita amin'ny frezy dia tsy maintsy soloina aorian'ny kapila famerenana roa na telo dia soloina fiovana iray. Noho izany, rehefa manolo ny pads freins dia tokony hojerena ara-potoana ihany koa ireo kapila vita amin'ny frezy, ary soloina rehefa tonta be.
Ankoatry ny fanamiana mahazatra ny kapila vita amin'ny frezy, dia misy ihany koa ny fiakanjoana vokatry ny kalitaon'ny valizy na ny kapila ary ny fananganana zavatra vahiny mandritra ny fandidiana ara-dalàna. Raha ny raharahan'ny raharaham-bahiny no anaovana ny valizy, ny lesoka lalina na ny tampon'ny kapila dia manao hadisoana (indraindray manify na matevina)
Hevitra hijerena ny fikojakojana kapila frein: Satria ny kapila vita amin'ny frezy dia hiteraka hafanana marobe mandritra ny freins, dia aza manasa avy hatrany ny fiara rehefa vaky ny fiara. Tokony hovonoinao ny frein mba hampihenana ny maripana ambonin'ireo kapila vita amin'ny freins mba hisorohana ny kapotra avo lenta hafanana noho ny fifandraisany amin'ny rano mangatsiaka. Ny fihenan'ny hatsiaka dia miteraka fanovana sy triatra. Ankoatr'izay, ny fomba tsara indrindra hampiakarana ny ain'ny kapres dia ny fitazonana fahazarana mitondra fiara tsara ary hiezaka ny hisoroka fijanonana tampoka.
Misoratra anarana amin'ny fanontaninay:
93 Tianyang Road, tanànan'i Fengqiao, Zhuji City, Faritanin'i Zhejiang